Shiinaha GCS soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha beddelka korantada ee lagala bixi karo korantada | GUULEYSTA
GCS kabtanka korantada lagala soo bixi karo oo danab yar leh
Qaybta alaabta ： Taxanaha Switchgear Danab Hoose
Horudhac ：Nooca GCS ee danab-ka-beddelidda la-bixiyaha ku-habboon ee ku habboon wuxuu ku habboon yahay nidaamyada qaybinta awoodda ee warshadaha korontada, batroolka, kiimikada, macdanta, dharka, dhismayaasha dhaadheer iyo warshadaha kale. Dhirta korontada ee baaxadda leh, nidaamyada batroolka iyo meelo kale oo leh heer sare oo otomaatig ah iyo is-dhexgalka kombiyuutarka, waxaa loo adeegsadaa sidii saddex-waji AC inta jeer ee 50 (60) Hz, oo lagu qiimeeyo danab shaqeyneysa 400V, 660V, oo lagu qiimeeyay hadda ee 5000A iyo wixii ka hooseeya. Qalab-hoose oo dhammeystiran oo ah qalab qaybinta awoodda oo loo adeegsaday qaybinta awoodda, kontoroolka mootada ee dhexe, iyo magdhowga awoodda firfircoon.
danab la qiimeeyay (V) ee wareegga ugu weyn
Wareegga kaabayaasha ah ee lagu qiimeeyo danab
inta jeer ee la qiimeeyay (Hz)
danab dahaarka lagu qiimeeyo (V)
Qiimaynta hadda (A)
hadda la qiimeeyay (A) (MCC)
Baska lagu qiimeeyo waqtiga-gaaban wuxuu u adkeysan karaa hadda (kA/1s)
Baska lagu qiimeeyay dulqaadka ugu sarreeya hadda (kA/0.1s)
Awoodda tijaabada inta jeer ee awoodda (V/min)
Wareegga ugu weyn
Seddex waji afar-silig ah
Saddex waji nidaam shan-silig ah
GCS Isticmaal xaaladaha deegaanka
Temperature Heerkulka hawadu ma ka sarreeyo +40 ℃, kama hooseeyo -5 ℃, iyo celceliska heerkulka 24 saacadood gudahood waa inuusan ka sarrayn +35 ℃. Markay dhaafto, waxay u baahan tahay in la dejiyo iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah;
Use Isticmaalka gudaha, joogga meesha la adeegsanayo waa inuusan dhaafin 2000m;
Humidity Qoyaanka xiga ee hawada ku xeerani kama badna 50% marka heerkulka ugu sarreeya uu yahay +40 ° C, oo qoyaan qaraabo ah oo weyn ayaa loo oggol yahay heerkulka hoose, sida 90% at +20 ° C. Waa in la tixgeliyaa in shilal ay dhici karaan isbeddellada heerkulka awgood Saameynta uumiga;
♦ Marka aaladda la rakibo, u janjeerka diyaaradda toosan kama badna 5 °, dhammaan kooxda safka golaha wasiirradu waa kuwo siman (oo waafaqsan heerka GBJ232-82);
Aaladda waa in lagu xiraa meel aysan ka jirin gariir iyo shoog, mana ku filna in qaybaha korontada aan la hoos marin;
The Marka adeegsaduhu leeyahay shuruudo gaar ah, wuxuu la xaajoon karaa soo -saaraha si uu u xaliyo.
Danjiraha Danab Dhexdhexaadiyaha
XL-21 Golaha Qaybinta Awooda
GGD switchgear danab hooseeyo
GCK kabadhka korantada laga rogi karo kabadhada
Sanduuqa qaybinta isku dhafan ee JP (magdhowga ...
GGJ korontada awood firfircoon reactive comp caqli ...